बौद्धमा ड’रलाग्दो घट’ना, घट’नास्थल पुग्दा प्रहरी नै च’कित्, मान्छे का’टेर बोराभित्र खु’ट्टा भेटियो ! (भिडियो हेर्नुहोस्) – UPDATE LINK
बौद्धमा ड’रलाग्दो घट’ना, घट’नास्थल पुग्दा प्रहरी नै च’कित्, मान्छे का’टेर बोराभित्र खु’ट्टा भेटियो ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
बौद्धमा ड’रलाग्दो घट’ना, घट’नास्थल पुग्दा प्रहरी नै च’कित्, मान्छे का’टेर बोराभित्र खु’ट्टा भेटियो ! (भिडियो हेर्नुहोस्) भिडियो अन्तिममा छ
काठमाडौं । उपत्यकामा एक लाश फेला परेको छ । बौद्धको टाउनप्लानिङ क्षेत्रमा बोराभित्र लाश भेटिएको हो । मंगलबार बिहान स्थानीयले बोरामा लाश देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । स्थानीयले खबर गरेपछि प्रहरी वृत्त बौद्धको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंह पनि घटनास्थल पुग्दै हुनुहुन्छ । केहीबेरमा विस्तृत विवरण थाहा हुने उहाँको भनाई रहेको छ । घटनाको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको के नाइन डिभिजनबाट तालिम प्राप्त कुकुरसमेत घटनास्थलमा पुग्दैछ ।
यो पनि, जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले देवघाट गाउँपालिकास्थित घाटमा मेसिनरी औजार प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ । केही दिनअघि बसेको समन्वय समितिको बैठकले त्रिशूली नदीको भुवनटार, सेती भतेरी र काली नदीको कालीभतेरी घाटमा मेसिनरी औजार प्रयोग गरेको देखिएकाले तत्काल मेसिनरी औजार प्रयोगमा रोक लगाउन गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा देवघाटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाले पालिकाले आन्तरिक आयस्रोत सङ्कलनका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन गराई गाउँसभा र गाउँकार्यपालिकाको बैठकको निर्णयानुसार ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभएको थियो ।
देवघाटको मिति २०७७ फागुन २० गते स्वीकृत भई फागुन २८ गते प्रमाणित भएको नदी किनारा तथा घाटहरुबाट प्राकृतिक नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धमा मेसिनरी उपकरण प्रयोग, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को व्यवस्थाबमोजिम निर्णय गरी मेसिनरी औजारको प्रयोग गरिएको सापकोटाले बताउनुभयो ।
“उक्त स्थानहरु धार्मिक महत्वका क्षेत्रका साथै चुरे संरक्षण क्षेत्रमा समेत पर्ने देखिएकाले तत्काल मेसिनरी औजार प्रयोग रोक्न निर्देशन दिइएको छ”, समन्वय समितिको निर्णयमा भनिएको छ । देवघाटस्थित स्वतन्त्र युवाहरुको समूहले जथाभावी रूपमा उत्खनन गरेको भन्दै गाउँपालिकासमक्ष विरोधपत्र बुझाएको थियो ।
समूहले गाउँपालिकाका मुख्य घाटहरुबाट जथाभावी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न माग गर्दै घाटको आइइ प्रतिवेदन, ठेक्का सम्झौता र उत्खनन गरेको परिमाणको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो ।